अन्य Archives - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com अन्य Archives - नागरिक रैबार
सुनचाँदीको मूल्य बढयो
कात्तिक २१ काठमाडौंः सुनको मूल्य पुनः वृद्बि भएको छ। बिहीबार तोलामा ४ सयले बढेर ७० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन ७० हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी, चाँदी ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरेहेको छ। त्यसैगरी, बुधबार प्रतितोला ७० हजार २ सयमा र तेजाबी सुन ६९ […]
रातको समयमा महिलाले गर्नु हुँदैन यी काम, जसले घरमा अशान्ति ल्याउँछ !
काठमाडौं : तपाईं धर्म-कर्ममा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? भनिन्छ महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ । कुनै पनि घरमा सुख शान्ति र समृद्धि ल्याउनु छ भने महिलालाई सत्कार गर्नु आवश्य हुन्छ । साधारणतया बोली चालीको भाषामा भन्ने गरिन्छ की जुन घरमा महिलाको सम्मान हुन्छ त्यो घर सधै सुख र शान्तिमय हुन्छ । यदि […]